Colaada Gaalkacyo: waa gacan ku rimis! | Jubbaland Media Online
Colaada Gaalkacyo: waa gacan ku rimis!
Posted on October 14, 2016 in Diinta, Feat, Wararka // 1 Comment
Dagaalada Gaalkacyo ka socda waa kuwa siyaasadeysan abaabulkoodana ka socdo meel ka baxsan Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug.
Waxaan la wada soconaa in bulshada gabolka mudug, siiba magaalada Gaalkacyo waa hore ka gudubtay dagaaladi sokeeye, wixii ka dambeeya heshiiski general Caydiid iyo korneyl cabdullaahi Yusuf bulshada reer Gaalkacyo waxay ku wada nooleyd nabad. Colaadan hadda ka soo cusboonaatay gobolka siiba magaalada Gaalkacyo waxay u muuqataa mid siyaasadeysan.
Waxaan ku garan karnaa in colaadan bilaabatay sanad ka hor, iyo in mar walba lagu soo beego xilli xasaasi ah.
Dagaalkan hadda socda waxuu ku soo aaday xilli kala guur ah oo madaxda dowladda federaalka dhex kuududaan fashil dilaa ah , guud ahaan dalkana lagu mashquulsan yahay wax loogu yeeray “doorashooyin dadban”
Dagaalkan waxuu ku bilowday amaba loogu qutubay duqeyntii Mareykanka ka geystay duleedka Gaalkacyo. Cidna kama dedna in Mareykaka beegsado goobaha uu ku tuhmo waxuu u yaqaano “cadowga Mareykanka, ama argagixisa” dalka Pakistaan oo ah dal haysta hubka Nuclear-ka waa dalka duqeymaha ugu badan Mareykanka ka geysto, welibana asaga oon ku wargelinin. Ma garan karno sida falka noocaas ah Puntland lagu eedeeyay oo welibana hadalla aan wanaagsaneyn saxafadda laga siidaay, wana arin markhaati laga wada yahay. Ma wasaaradda gaashaadhigga Mareykankaa la hoos geeyay Puntland, mise wax kalaa jira, ma naqaano?
Dagaalkii bishii Mach ee sanadkan dhex maray ciidamada Puntland iyo Alshabaab waxuu ku beegnaa xilli shacabka iyo siyaasiyiinta Puntland si xoogan u diideen dib wax ugu qeybsiga nidaamka 4.5. Si la mid ah dagaalki ka horeeyay waxuu ku beegnaa xilli loo balansanaa shirkii madasha wadatashiga qaran, xilligaas Puntland waxay ka biyodiidaneyd la fariisiga madaxweynaha maamulka Galmudug C/Kariim Xuseen.
Waxaa kaloo la is weydiinayaa waxa dagaalada noocan ah ku koobay gobolada Mudug iyo Shabeelaha hoose oo keliya, xilli lala war hayo in dalka intiisa kale ay ka dabar go’een? Guud ahaan gobolada kale ee dalka waa nabad, marka laga reebo dagaalada fikirka ku saleysan ee dhex mara Alshabaab iyo dhinacyada dagaalka kula jira, Marko iyo Gaalkacyo maxaa ka duway dalka intiisa kale?
Dhanka kale colaada Gaalkacyo waxay bilaabatay sanad ka hor, xilligii la yagleelay maamul-goboleedka Galmudug, lana filayay in nabadda iyo amniguba sii hagaagaan, maxay tahay sababta?.
Isku soo xooriyoo, Ma jirto colaad u dhexeysa guud ahaan umadda soomaaliyeed gaar ahaan reer Gaalkacyo, marka laga reebo colaadahan gacan ku rimiska ah ee ay wado dowladda federaalka Soomaliya.
1 Comment on Colaada Gaalkacyo: waa gacan ku rimis!
Ina bide hurre // October 14, 2016 at 4:12 am // Reply